Ividiyo: Okuqukethwe kuqhathaniswa nama-Backlinks | Martech Zone
Ividiyo: Okuqukethwe kuqhathaniswa nama-Backlinks
NgeSonto, Okthoba 26, 2008 NgoLwesihlanu, Okthoba 17, 2014 Douglas Karr
Abantu abaningi basebenzisa futhi bathengise isikhathi sabo ekusebenzeni kwewebhusayithi yabo, futhi bavuse ukunwaya amakhanda abo lapho enye isayithi inezinga eliphakeme kepha ingalungiswa. Kungenxa yokuthi ukwengeza okuqukethwe yingxenye yempi kuphela, ukuthola ukunakwa kwamanye amasayithi acindezela isayithi lakho ukuthi libe nemiphumela yosesho. Umsebenzi wenjini yokusesha ukuhlinzeka ngemiphumela efanele. Uma amanye amasayithi amaningi ahlonishwayo akhomba kuwe futhi athi, "uyilokho oyikho!", Izinjini Zokusesha zizokunaka kakhulu lokho!
Tags: 3bounceimiphumela yebhizinisicaptchaubuchwepheshe bokuzethembaukuhanjiswalyrisLinganisa i-CPnguyen
Ithiphu Yokuqukethwe: Ukulandelana Okushukumisayo kukaMonroe
Thatha i-Second Second Blogging Challenge
I-Oct 28, i-2008 ku-12: i-08 PM
Ngicabanga ukuthi okuqukethwe kungcono kimi. Ngichaze kabanzi ngalokhu, Inhloso yebhulogi yakho ukuthola izivakashi eziningi. Ngakho-ke kufanele unikeze futhi uthumele konke okuqukethwe okufanele kwe-niche okuthakazelisa okuvela kubavakashi noma kubabukeli. Imininingwane ekwibhulogi yakho ibalulekile, ukwaziswa okuhle ngokwengeziwe kuba ngcono futhi amasayithi amaningi azokuxhumanisa abuyele kuwe.
I-backlink ayilinganiswa nesiza sakho esihle. Amanye amawebhusayithi ayexhumene nenye iwebhusayithi ye-niche kepha ubungako obuphansi be-pr noma isilinganiso se-pr singathola. Amanye amanye amasayithi angasebenzisa ukushintshaniswa kwezixhumanisi ezimnyama ngendlela eyodwa.
Izivakashi zithola izibuyekezo zakamuva noma imininingwane ebalulekile. Ikakhulukazi izivakashi zaziba amasayithi lapho zivula isixhumanisi ngokusebenzisa i-backlinked lapho zibona ukuthi akunakho okuqukethwe okufanele noma okubalulekile okugaxekile kuphela.